ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များသည် DM Engineering Switching Devices များအတွက် DASDEC အထောက်အပံ့ကိုဖြည့်စွက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဖုန်းများအတွက်သို့ပြောင်းပါ DM အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များထည့်သွင်းပေး DASDEC ပံ့ပိုးမှု
ဖုန်းများအတွက်သို့ပြောင်းပါ DM အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များထည့်သွင်းပေး DASDEC ပံ့ပိုးမှု
LYNDONVILLE, နယူးယော့ - သြဂုတ်လ 26, 2014 - ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များ, မွန်ရိုးအီလက်ထရောနစ်တစ်ဌာနခွဲ, ယနေ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဟာ့ဒ်ဝဲ / software ကိုအရေးပေါ်စာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်း၎င်း၏ DASDEC (TM) စီးရီးတစ်ခုအဆင့်မြှင့်ကြေညာခဲ့သည်။ DM အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် DASDEC စနစ်များကိုယခု DM အင်ဂျင်နီယာ Multi-ဘူတာ Relay Adapter ကို (MSRA) နှင့် Multi-ဘူတာ Relay Expand (MSRE) switching devices တွေကိုထောက်ခံပါတယ်။ ထိုထုတ်ကုန်ထို့နောက်ရိုးရှင်းစွာတစ်ဘူတာအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံချွေတာ, DASDEC မှအဆင့်မြှင့်သည့်အခါလုံးဝ switching ဟာ့ဒ်ဝဲ rewire သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေး, အ DASDEC ရဲ့ user interface ကိုထံမှ configured တစ်အမှတ်စဉ် cable ကိုကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။
"ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များကိုင်တွယ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလိုအပ်တော်မူသောငါတို့၏လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုံးစုံတန်ဖိုးနှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့် interfaces ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက် EAS နှင့် CAP လိုအပ်ချက်များကို "ဘီလ် Robertson ကဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။ "DM အင်ဂျင်နီယာရဲ့ MSRA နှင့် MSRE ထုတ်ကုန်ဘူတာ၏နံပါတ်အကြားကျယ်ပြန့်ကလေးမွေးစားခြင်းမြင်ကြပြီ။ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ဖြစ်တယ်တစ်ခု interface ကိုထားရှိခြင်းသည်တည်ဆဲ DASDEC ဖောက်သည်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကုန်ကျ-ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေနေသေချာ EAS/ ပိုပြီးစီးပေါ် CAP လွှမ်းခြုံအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ဘူတာ '' switching လိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ DM အင်ဂျင်နီယာထုတ်ကုန်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ပြီးသား MSRA ထုတ်ကုန်ရှိသည်ဘူတာသူတို့ကိုအသုံးပြုရိုးရှင်းစွာမိမိတို့၏ဟောင်းဖလှယ်ဆက်ပြီးနိုင်ပါတယ် EAS တစ်ဦးအပြည့်အဝပေါင်းစည်း DASDEC စနစ် devices များ။ "
တစ်ဦးထက်ပို program ကိုများသောအားဖြင့်ထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်နောက်ထပ်အသံ switching လိုအပ်ပါတယ်ဖုံးလွှမ်းရန် Das MultiStation (TM) software ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးက DASDEC စနစ်။ ဤဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖို့ MSRA သို့မဟုတ် MSRE ထုတ်ကုန်များ၏ထို့အပြင်ပေးတစ်ခုတည်း DASDEC system အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့စေသည် အရေးပေါ်အချက်ပေးစနစ် (EAS) ကိုပိုမိုအစီအစဉ်သတင်းအချက်အလက်စီးနှင့်အနည်းငယ်မျှသာဝါယာကြိုးများနှင့်အတူအဲဒီလို - နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များနိမ့်ဆုံး - ထို MSRA built-in အသံဖြန့်ဖြူး amp လည်းပါဝင်သည်။ အကြောင်းမူကား,
"ကျနော်တို့က DM အင်ဂျင်နီယာ Multi-ဘူတာ adapter နဲ့ချဲ့ထွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များထုတ်ကုန်နဲ့အကြီးအထိုက်မတန်ဖြစ်, နှင့် DASDEC သုံးပြီးထုတ်လွှင့်မှုအတွက်မျိုးစုံ-ဘူတာရုံထိန်းချုပ်မှုပူဇော်မယ်လို့ခံစားရတယ် EAS အန်ကုဒ် / ဒီကုဒ်ဒါ, "Dave Mandelbaum, DM အင်ဂျင်နီယာပိုင်ရှင်ကပြောသည်။ "ကျနော်တို့ကအခြားအတူအတိတ်၌ကြီးသောအောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါပြီ EAS ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူနှင့်ဤပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များ၏နှစ်ဦးစလုံးကိုချဲ့ထွင်မယ်လို့ခံစားရတယ်။ "
အဆိုပါအဆင့်မြှင့်တင်လာမယ့်အပြည့်အဝ system ကိုဖြန့်ချိချိန်အထိကန့်သတ်အခြေခံပေါ်မှာမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအဆင့်မြှင့်တစ် Plus အား Package ကို install လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စနစ်များကိုမှ MultiStation-2 သို့မဟုတ် MultiStation-5 သော့ကဆက်ပြောသည်ကြသူ DASDEC အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆင့်မြှင့်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာစက်ရုံထဲကနေရရှိနိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected] သို့မဟုတ် 585-765-1155 ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များနှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.digitalalertsystems.com။ မွန်ရိုးအီလက်ထရောနစ်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.monroe-electronics.com.
ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များမျိုးဆက်သစ်အဖြစ်များသည့် Alert ပရိုတိုကော (CAP) နှင့်အရေးပေါ်အချက်ပေးစနစ်များ (တစ်ဦးဦးဆောင်ဆန်းသစ်နေEAS) ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေး၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အောက်တိုဘာလ 2003 ဖွဲ့စည်းနှင့်အောက်တိုဘာလ 2009 အတွက်မွန်ရိုးအီလက်ထရောနစ်နှင့်အတူပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ Lyndonville, New York မှာအခြေခံပြီး, မွန်ရိုးအီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် R & D, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကမ္ဘာတဝှမ်းတန်ဖိုးထားဖောက်သည်အရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုက၎င်း၏ Hard-ရရှိခဲ့သည်ဂုဏ်သတင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.digitalalertsystems.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/DAS/DAS-MSRA-RM3644withShadow.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Das MSRA RM 3644
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/DAS/DAS-MSRE-RMwithShadow-Lg.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Das MSRE-RM
DASDEC ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များ DM အင်ဂျင်နီယာ 2014-08-27
ယခင်: SMPTE 2014 Honorees နှင့်ဆုချီးမြှင့် Winners ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: ဒိနျးမတျအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူ ioGates လက္ခဏာတွေ Long-Term မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်